Ogaden News Agency (ONA) – 30kii Sano ee ONLF Halganka u Hanaqaaday Maxaa Inoo Qabsoomay
30kii Sano ee ONLF Halganka u Hanaqaaday Maxaa Inoo Qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ August 5, 2014
Soddon sano marka la eego taariikhda shucuubta ma’aha wax badan, hasa ahaatee taariikhda ururada siyaasiga ah waxaa loo astaamaysan karaa – Xilli Fikir iyo Maxaa Inoo Qabsoomay ah-. In Dib Loo Fiiriyo Meeshii Laga Soo Ambaqaaday Shalay, Laga Doodo Meesha La Joogo Maanta, La Hubsado Yoolka la Hiigsanayo.
Waxaynu nahay umad gumaysi ku jirta, mana filayo inuu jiro qof Somali ah oo shaki uu kaga jiro arintaa, wayse dhici karaan qaar aaminsan in gumaysiga lala noolaan karo hadii loo ogolaado –master-nimadiisa. Ama qaar aaminsan in loo shaqayn karo hadii laga helo Gunno Fiican.
Umad la gumaysto waxaa waajib ku ah, oo qawaaniinta caalamka, mid Ilaahay soo dajiyay iyo mid bani-aadam samaystayba u ogolyihiin, in ay ka dhiidhiyaan oo wada kasta o suurtagal u ah u maraan xoriyadooda. Waxaa hubaal ah in shacabka Ogadenya yahay shacabka 1aad ee Afrika ee diiday ilaa maantana diidan gumaysiga, ha ahaado mid qaarad kale kasoo duulay ama ha ahaado midka hadda haysta ee dariska la’ah. lagumana hayo taariikhda, sidaan ka dhagaysnay mudane M. Diirane, qof Somali ah oo u ogolaaday gumaysiga Itobiya dalka Ogadenya. Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) wadadaa ayay haysaa, waana go’aan shacab ee ma’aha mid ururka uu si gooni ah u gaadhay.
Hadday arintu sidaa tahay, meeshii laga soo ambaqaaday waa lawada garanayaa. Hadii lasoo koobona, markii lagu soo jabiyay ciidankii Jamhuuriydda Somaliya dagaalkii 1977, waa iyadii lagu qasbay Dawladii Maxamad Siyad Barre inay ogolaadaan inay joojiyaan faragalinta xuduudaha oy joojiso Somaliya gabi ahaanba inay taageerto/hubayso mucaaradka Itobiya oo loola jeeday WSLF. Hadafkuna wuxuu ahaa in taariikh cusub loo sameeyo gobolka oo siduu horeyba u yidhi Winston Churchill; Taariikhda waxaa qora kuwa adkaada (History is written by the Victors), lagu socodsiiyo shacabka Somaaliyeed ee Ogadenya, oo laga dhigo qadiyadooda khilaaf xuduudeed oo u dhexeeyay Somaliya iyo Itobiya oo lagu kala adkaaday. Sawirka dhabta ah ee u muuqday xubnihii asaasay ururka iyo gabi ahaan shacabka Ogadenya wuxuu ahaa midkaa, waxaana qasab ahayd in baal cusub loo dajiyo taariikhda halgan ee shacabka Somalida Ogadenya. Kaasoo ku salaysan in aan lagu tashanin taageero dibadda ah oo la sugo in qadiyadda Ogadenya ay tahay qadiyad shacab la gumaysto oo xaq u leh inuu helo Aayo-Ka-Tashigiisa sida ku xusan qawaaniinta dawliga ah.
Tobankii sanee ugu horeysay (1984 – 1994) waxaa lagu hawlanaa; Dhismaha ururka hoos ilaa kor, abaabulka wacyigalinta bulshada iyo iska caabinta faragalinta gude iyo dibadba. Arimahaa ma’ahayn wax sahlan, markaad dib u fiiriso taariikhdaa iyo isbadaladii ka dhacay Geeska Afrika, gaar ahaan burburkii Qarankii Somliyeed, qabsashadii Itobiya jabhadda TPLF ee jabisay Xukuumadii Mingisto, Walaahowgii ku dhacay umadda Somaliyeed meel ay joogaanba iyo Isbadalkii ka dhacay caalamka markuu burburay Sofyetkii (USSR) oo ahaa xoogii kasoo horjeeday reer galbeedka oon ogsoonahay xidhiidhka ay la leeyihiin gumaysiga Itobiya/Abyssinia.
Gumaysiga markuu ogaaday inuusan ururka ONLF la mid ahayn dhowr iyo tobankii xisbi ay u sameeyeen inay kula dagaalamaan barnaamijka ONLF ee aaya-ka-tashiga, ayay dagaal kusoo qaadeen, waxayna ku talagaleen in muddo dhowr bilood ah ay kaga sifeeyaan dalka, maadaama ururkii Itixaadka ee ka xoog badnaa hub, saanad iyo dhaqaalaba ay ka saareen dalka.
Siduu ururka ONLF uga soo gudbay caqabadahaa aan tilmaanay waxaa midwalba laga qori karaa kitaab, mana ahayn runtii arin ay Itobiya filaysay ama caalamka daneeya arimaha Geeska Afrika ay sugayeen.
Halkan ka akhri Q2aad.
Halkan ka akhri Q3xaad.
cabdi rashiid maxamad Nuur (wadani) says:
wlhi aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wax ka ogaado halganka ay ogaadenya soo mareen waxaan ku tilmaami karaa imtixaan kii ugu adkaa ilaahay hala jiro aniguna qudheydu diyaar waxaan u ahay inaan naf iyo maal ku taageero walaalahay,waalidkeey, iyo dhamaan dadkeyga ogaadenya waxan joogaa muqdisho hadii aay jirto meel ii furan oo aan kaga biiri karo wan is qorayaa wlhi gumeeysiga abyssinia kama raali roqonayo inuu noo taliyo